SAWIRRO XUL AH: Ciyaar lagu maamuusayo maalinta shaqaalaha adduunka oo galabta ka dhacday garoonka Wiish – Gool FM
SAWIRRO XUL AH: Ciyaar lagu maamuusayo maalinta shaqaalaha adduunka oo galabta ka dhacday garoonka Wiish
jilacow April 30, 2017
(Muqdisho) 30 Abriil 2017-Xilli bari ay ku beegan tahay 1-da May oo ah maalinta shaqaalaha adduunka ayaa galabta garoonka Wiish waxaa lagu ciyaaray kullan xiiso badan kaasoo lagu maamuusayay maalintaas ku weyn dunida.
Kullanka ayaa waxaa is arkay koox ku ciyaareysay magaca Wasaaradda iyo xiddigo kala duwan oo laga soo xulay kooxaha ka ciyaara dalka iyo ciyaartooydii cuslaatay.
Goobta ay ciyaarta ka dhaceysay waxaa ku sugnaa masuuliyiin kala duwan oo uu hoggaaminayo wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha iyo hormarinta arimaha bulshada mudane Saalax Axmed Jaamac, wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow,xubna ka socday wasaardaha kala duwan ee dalka, masuuliyiin ka tirsan GOS iyo xiriirka kubadda koleyga Soomaaliya.
Koobkii lagu maamuusayay 1-da May waxaa ku guuleysatay kooxdii ku ciyaareysay magaca wasaaradda iyadoo halkaas lagu guddoonsiiyay koob aad u qurux badan.
Wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha iyo hormarinta arimaha bulshada mudane Saalax Axmed Jaamac oo goobta ka hadlay ayaa ugu horeyn u mahad celiyay shaqsiyaadkii soo qaban qaabiyay kullankaas, isagoo dhanka kale sheegay in Wsaaraddu ay waddo qorsho ay shaqo ugu abuureyso dhallinta Soomaaliyeed.
Sikastaba Soomaaliya ayaa si weyn loogu xusaa maalinta shaqaalaha adduunka, waxaana inta badan dalka lagu qabtaa munaasibado iyo koobab loo dhigo kooxaha ka dhisan dalkeena.
GOOGOOSKA: Crotone vs AC Milan 1-1 (Milan oo aan meelna u socon)
GOOGOOSKA: Inter Milan vs SSC Napoli 0-1 (Inter Milan oo markii 6-aad oo xiriir ah badin wayday)